सौर प्यानल स्थापना DIY ट्यूटोरियल! - किमरोय बेली समूह
31अक्टोबर अक्टोबर 31, 2016
यो भिडियो कंक्रीट छतमा सौर प्यानल स्थापनाको निर्देशात्मक DIY ट्यूटोरियलमा हाम्रो श्रृंखलाको पहिलो हो। यो ट्यूटोरियल नवीकरणीय उर्जा स्थापनाकर्ताहरू र घर मालिक जसले उनीहरूको आफ्नै सानो प्रणाली स्थापना गर्नमा रुचि राख्छन्। यसले कसरी देखाउँछ कि हामी कसरी एल्युमिनियम रेल माउन्ट गर्छौं, तारहरू जोड्दछौं, कम्बानर बक्सलाई, र चार्ज कन्ट्रोलर, इन्भर्टर, र ब्याट्रीहरूको लागि बिजुली तार पनि दियो। यो एक बन्द ग्रिड घर हो जुन १ वारा टर्बाइन र solar सौर प्यानलहरू द्वारा संचालित हुन्छ। यो घर जेपीएस (जमैका लोक सेवा कम्पनी) द्वारा संचालित कहिल्यै भएको छैन। र हामीले यसलाई ग्रिडबाट पूर्ण रूपमा लिएका छौं। त्यसैले यो घर पूर्ण रूपमा अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित छ। त्यसो भए यसमा solar सौर प्यानल र १ वारा टर्बाइन छ। र यो खुसी ग्राहक हो।
सौर प्यानल स्थापनाको लागि आइटमहरू आवश्यक छ
Solar सौर प्यानल २ 8०W मा मूल्या at्कन गरिएको छ
२ एल्युमिनियम रेलहरू १ft फुट लामो
End एंड क्ल्याम्प्स र १२ मिड-क्ल्याम्प्स
एक break ब्रेकर कम्बीनर बक्स
DC DC DC ब्रेकर १AAmp वा २०Amp
Ft० फूट AWG Red रातो र कालो सौर तार
सौर प्यानल स्थापनाको लागि एल्युमिनियम रेलहरू
सौर प्यानल स्थापनाको लागि प्यानलहरूलाई एल्युमिनियम रेलमा कडा पार्दै
पहिले हामी सौर प्यानेललाई छतमा लग्छौं र हाम्रो सौर प्यानल स्थापनाको लागि तयारी गर्दछौं। सौर्य प्यानलहरूको लागि क the्क्रीट छतमा एल्युमिनियम र्याक सुरक्षित गर्न हामी कच्चा बोल्ट प्रयोग गर्दछौं।
रल उच्च-स्तरको लंगरको विश्वको अग्रणी निर्माताहरू मध्ये एक हो बोल्टहरू निर्माण, औद्योगिक रखरखाव, र नवीकरण परियोजनाहरूको लागि प्रयोग। रल एङ्कर बोल्टहरू मुख्य रूपले क concrete्क्रीट, ईंट, ब्लक र ढु to्गाका लागि संरचनाहरू स्थापना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
यो सौर प्यानल स्थापनाको लागि हामीले M6 बोल्ट प्रयोग गर्‍यौं त्यसैले हामीलाई mm एमएम प्वाल चाहिन्छ र यो mm 8 मिमी गहिरो हुनुपर्छ। प्रत्येक १ feet फिट लामो एल्युमिनियम रेलको २ लम्बाइहरूले solar सौर प्यानल समात्न सक्छन्। त्यसैले हामी प्यानलहरूलाई चार प the्क्तिमा स्टक गर्दछौं। खुट्टा लch्कर गर्दा यो एक अर्काबाट feet फिट जति लंगर खुट्टा स्थापना गर्न उत्तम हुन्छ। हामी यहाँ प्रयोग गरिरहेका छौं टी-क्ल्याम्प्स वा मिड-क्लेम्स जसलाई तपाईले देख्नुहुन्छ। यी सौर्य प्यानलहरू सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ र अन्तमा एल-क्ल्याम्पहरू प्रत्येक प्यानलको अन्त्यमा स्थापना हुनेछन्। त्यसो भए हामी अगाडि बढ्छौं र सौर्य प्यानेललाई शाब्दिक रूपमा समात्छौं। र हामी यसलाई एल्युमिनियम रेलमा ल्याउँदछौं।
यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि विद्युत तार माथि छ। किनकि यो हाम्रो कम्बीनर बक्सको नजिक छ। यहाँ हामी टी-क्ल्याम्प वा मध्य क्लैम कसिरहेका छौं। यी वास्तवमा दुई सौर प्यानल बीचमा अवस्थित छन् र तपाईं माथिको मा र कसलाई तल कसिलो गर्नुहोस्। यदि तपाईं यस भिडियोमा राम्ररी हेर्नुहुन्छ भने तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ टी-क्ल्याम्पले दुई नजिकैको सौर प्यानलहरू एकसाथ बाँध्छ। र अन्त्यमा हामी अन्त L-Clamps प्रयोग गर्छौं। हामी प end्क्तिको अन्त्यमा अन्त L-Clamps मात्र प्रयोग गर्छौं। तपाईं, त्यसकारण, सौर्य प्यानलहरूको प्रत्येक प row्क्तिको लागि प्रत्येक अन्तमा दुई साथ end अन्तिम क्ल्याम्प चाहिन्छ। यहाँ हामी हाम्रो सौर प्यानल स्थापना मा केहि अधिक मध्य-क्ल्याम्प अप कसिरहेका छौं।
सौर प्यानल स्थापनाको लागि इलेक्ट्रिकल जडान
हाम्रो सौर प्यानल स्थापनाको लागि विद्युत तारहरू जोड्दै
तपाईको सौर्य प्यानल मुनि क्रल गर्नुहोस् र बिजुली तारहरू एकसाथ जोड्नुहोस्, त्यो गाह्रो हिस्सा हो। तर यो निकै सिधा अगाडि छ। जब तपाइँ श्रृंखलामा तपाइँको सौर प्यानलहरू जडान गर्दै हुनुहुन्छ तब तपाइँ एक सौर प्यानलको नकरात्मकलाई अर्कोको सकारात्मकसँग जोड्नुहुन्छ। हामी दुई प्यानल श्रृंखलामा राख्छौं। हाम्रो panel प्यानल स्थापनाको लागि, हामीसँग वास्तवमा दुईवटा प्यानलका चार समूहहरू छन्। प्रत्येक हाम्रो Cominer बक्स मा एक 8AMP सर्किट ब्रेकर संग जोडिएको।
यहाँ हामी दोस्रो प row्क्ति बिछ्याइरहेका छौं। हामी पक्का गर्छौं कि प row्क्ति सही तरिकाले अवस्थित छ र हामी यो पनि सुनिश्चित गर्दछौं कि अघिल्लो प row्क्तिबाट छाया पछाडि प in्क्तिमा सौर प्यानलमा कास्ट गरिएको छैन। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि छायाँले तपाईंको सौर प्यानल स्थापनाको उत्पादकत्वलाई नकारात्मक असर पार्छ। तपाईं आफ्नो 8mm ड्रिल बिट को उपयोग गरेर केहि अधिक प्वालहरू बोर गर्नुभयो। सबै भन्दा धेरै पक्का छन् कि प्वाल राउल बोल्ट फिट गर्न क्रममा 35mm गहिरो छ।
कम्बीनर बक्स स्थापना
कम्बीनर बक्सको भूमिका धेरै सौर्य स्ट्रि ofको आउटपुटलाई सँगै ल्याउनु हो। तीनीले आउने शक्तिलाई एक मुख्य फिडमा समाहित गर्न पनि प्रदान गर्दछ जुन ग्रिड-टाई प्रणालीको लागि सोलर इन्भर्टर वा अफ-ग्रिड प्रणालीको लागि चार्ज कन्ट्रोलरमा वितरण गर्दछ। सौर प्यानल जोडी मा जोडिएको छ। फलस्वरूप प्रत्येक जोडीको सकारात्मक १AAmp ब्रेकरमा जडित छ। यसबाहेक प्रत्येक जोडीको नकारात्मक नकारात्मक पट्टीमा जोडिएको छ।
अन्तमा, सौर प्यानलको स्थापनाबाट ग्राउन्डि the पनि कम्बीनर बक्समा जडित छ। यसले बिजुलीको प्रहारको घटनामा सोलर प्यानलहरूको सुरक्षा गर्दछ। नतिजाको रूपमा, तारका तीन सेटहरू कम्बीनर बक्समा जडित छन्। सबै भन्दा बढि यसले तारहरुलाई समेकित गर्न कार्य गर्दछ। W तारहरू प्यानलबाट आउँदा तिनीहरू चार्ज कन्ट्रोलरको लागि दुई तारमा समेकित हुन्छन्।
हाम्रो solar सौर प्यानल स्थापनाको सिंहावलोकन
यहाँ हामी मध्यरात्रको ब्राण्डको कम्बीनर बक्स प्रयोग गरिरहेका छौं। यहाँ हामी सौर्य प्यानलको दोस्रो प row्क्ति स्थापना गर्दैछौं। यी प्यानलहरू पनि जोडीमा जोडिएका छन्। तिनीहरू सकारात्मकमा नकारात्मक रूपमा जडित छन् र त्यसपछि चार्ज कन्ट्रोलरमा पठाइन्छ। र अब यो हाम्रो अन्तिम अन्तिम सौर प्यानलको लागि समय हो। हो, त्यहाँ तपाईं यो छ। प्यानल तल आउँदैछ। अब हामी हाम्रो विद्युतीय तारहरू मार्गमा जाँदैछौं र ती सबैलाई हाम्रो कम्बिनर बक्समा जडान गर्नेछौं।
हाम्रो टेक्नीशियन अर्देन ब्राउन कम्बीनर बक्समा प्यानल जडानहरू पूरा गर्दैछ। यो ब्रेकरहरू घुसाएर र प्यानलबाट सम्बन्धित ब्रेकरमा सकारात्मक लेग जडान गरेर गरिन्छ। नकारात्मक तटस्थ बारमा र भूमि भूमिमा लगगेर।
कम्बाइनर बक्सबाट चार्ज नियंत्रकमा
सौर प्यानल स्थापना सुरक्षित गर्न एलेन कुञ्जी प्रयोग गर्दै
अब यो बिघ्नयुक्त बक्सबाट तल बिजुलीका तारहरू सञ्चालन गर्ने समय हो र तपाईंको विद्युतीय सर्किट जडानहरूमा जहाँ तपाईंसँग चार्ज कन्ट्रोलर, इन्भर्टर र ब्याट्री हुनेछ। यो एक धेरै लामो दौड थियो त्यसैले तपाईले यो निश्चित गर्नु पर्दछ कि तपाईका तारहरू ठीक प्रकारका छन्। AWG6पर्याप्त हुनुपर्छ। हाम्रो तारहरू डबल इन्सुलेट छन् त्यसैले हामी तिनीहरूलाई सतहमा चलाउन सक्षम छौं तर हामी अझै विद्युतीय नाली प्रयोग गर्दछौं। यसले सूर्यले बाहिरी इन्सुलेटर लगाउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्दछ।
र त्यसपछि हामीसँग ड्र बक्स छ जसले हामीलाई छतबाट तल हाम्रो बिजुली ड्रॉ बक्समा तल तान्न अनुमति दिन्छ। हामी त्यसपछि यो विद्युतीय ड्रॉ बक्सबाट बाहिर जान्छौं र घर भित्र तारहरू पठाउँछौं। चार्ज कन्ट्रोलरमा, इनभर्टर र ब्याट्रीहरू। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग ब्रेकि points पोइन्टहरू छन्। यदि भविष्यमा समस्या निवारणको कुनै कारणहरू छन् भने तपाईँ तारहरू पहुँच गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
टीमकेबी, यो ट्यूटोरियलको लागि भिडियो हेर्न र लेख पढ्नका लागि धेरै धेरै धन्यबाद। शृंखलाको अर्को भिडियोमा ट्यून रहनुहोस् जुन तपाईंलाई कसरी सौर प्यानल चार्ज कन्ट्रोलरमा जडान गर्ने देखाउँदछ। कृपया यो लेख लाईक गर्नुहोस् र फेसबुकमा आफ्ना साथीहरूसँग साझा गर्नुहोस्। यस प्रणालीमा टिप्पणी गर्न र प्रश्न गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
ट्रट बेली परिवारद्वारा ओएसिस भिडियोहरूको सदस्यता लिनुहोस् थप निर्देशात्मक नवीकरणीय ऊर्जा भिडियोहरूको लागि!
धन्यवाद टीमकेबी, हामीलाई #KelBelieving।
किम्रोय बेली फाउन्डेशनका संस्थापक, केबी रोबोटिक्स र केबी नवीकरणयोग्यहरू। किमरोय यस क्षेत्रका एक अग्रणी ईन्जिनियरिंग दिमाग हुन् र प्रधानमन्त्री, गभर्नर जनरल र आईईईई, आफ्नो ईन्जिनियरिंग नवाचारहरूको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो पेशेवर ईन्जिनियरि body निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त छन्। किम्रोय बेली रोबोटिक्सले हाल CXC सँग परामर्श गर्दछ क्यारेबियनमा उच्च स्कूलहरूमा रोबोटिक्स र नवीकरणीय ऊर्जा एकीकृत गर्न।
TOSIN ओलोफिन जवाफ
शुभ बेलुका केबी, मेरो नाम नाइजेरियाबाट तोसिन हो, मैले नवीकरणीय ऊर्जाको अध्ययन गरेको छु, नाइजेरियाबाट आएको हुँ। तपाईं मान्छेहरूले जमैकामा गरिरहेका असल कामहरूबाट म धेरै प्रभावित छु, मसँग सोलरको ज्ञान छ तर म सौर र हावाको संकर स्थापना सिक्न चाहन्छु, मलाई थाहा छैन यदि उनीहरूले तपाईंको प्रशिक्षण संस्थानमा त्यस्ता तालिम लिइरहेका छन् वा छैनन् भने। म भाग लिन चाहन्छु। फिर्ता सुन्न आशा। धन्यवाद
नोभेम्बर 24, 2017 10 मा: 00 हूँ
किमरोय बेली जवाफ
हेलो तोसिन, नाइजेरिया यति सुन्दर छ कि हामी त्यसलाई त्यहाँ माया गर्छौं। स्टेप बाय स्टेप सोलर कोर्सले तपाईंको घरमा सौर प्यानल प्रणाली स्थापना गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, जबकि स्टेप बाय स्टेप टर्बाइन कोर्सले तपाईंलाई कसरी सौर स्थापनामा पवन टर्बाइन कसरी एकीकृत गर्ने भनेर सिकाउँदछ।
मई 29, 2020 8 मा: 39 बजे
सौर्य प्यानलको लागत कति छ?
शुल्कमा कति शुल्क लिइन्छ?
त्यहाँ कुनै छूट वा बोनस सरकार वा उपयोगिता कम्पनीहरु खरीद छन्?
के तपाईं ग्रिड कुनै समस्या छैन अफ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं ग्रिडमा पावर फिर्ता पठाउन पैसा पाउनुहुनेछ यदि तपाईंले बाँध्नु भयो भने?
नोभेम्बर 28, 20174मा: 08 बजे
चार्ल्स ब्राउन जवाफ
यो सौर प्यानल को स्थापना चरणहरु को बारे मा जान्न धेरै रोचक छ। कृपया हामीलाई स्थापनाको लागि सबै सामग्रीहरू प्राप्त गर्ने लागतको बारे थाहा दिनुहोस् र त्यहाँ कुनै दिशा छ कि सूर्य प्रकाश प्यानलमा ऊर्जा बनाउन पतन हुनेछ। स्टेप बाय स्टेप सोलर अनलाइन कोर्स साँच्चै इन्टरनेटमा सबै भन्दा राम्रो प्रशिक्षण कोर्स हो।
अप्रिल 3, 20182मा: 51 हूँ
20अप्रिल अप्रिल 20, 2013
जमैका पेगासस २०१ 2013 सोमबार, अप्रिल १,, २०१ Energy मा सम्पन्न जमैका अक्षय ऊर्जा एक्सपोमा किम्रोय बेली तल झरे ... थप पढ्नुहोस्
10जुन जुन 10, 2016
किम्रोय बेली नवीकरणीय रोबोटिक्स समर क्याम्प फ्लायर २०१ Kim किम्रोय बेली रोबोटिक्स र टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, जमैकाको साझेदारी छ ... थप पढ्नुहोस्
30Mar मार्च 30, 2013
टापुव्यापी ब्ल्याकआउट! १००% नवीकरणीय विश्वसनीय छ
शनिबार मार्च the० मा जमैका पब्लिक सर्विस कम्पनीको ,30०००० ग्राहकहरु मध्ये 90 ०% भन्दा धेरै धेरै घण्टा स्थिर रह्यो ... थप पढ्नुहोस्
24अगस्ट अगस्ट 24, 2014
Students० विद्यार्थी, days दिन, KB नवीकरणीय रोबोटिक्स समर क्याम्प
किम्रोय बेली ग्रीष्मकालीन रोबोटिक्स शिविरका एक गर्व सहभागी Jourdan Dunkley द्वारा योगदान। जॉर्डन (लेखक) दायाँ बाट मद्दत बाट दोस्रो ... थप पढ्नुहोस्
28Feb फेब्रुअरी 28, 2016
नवीकरणीय उर्जा र रोबोटिक्सले जमैकाको अर्थव्यवस्थामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्दछ। केवल ०-१-१% विकासको चालीस वर्षले एक बाध्यता ... थप पढ्नुहोस्
त्यसोभए तपाईसँग बहु-अरब डलर सौर्य उद्योगबाट केहि गम्भीर पैसा कमाउने भव्य धारणा छ तर तपाईं ... थप पढ्नुहोस्
08दिसम्बर डिसेम्बर 8, 2015
किम्रोय बेली रोबोटिक्स क्याम्प २०१।
केबी नवीकरणीय रोबोटिक्स प्रयोगशालामा बेलीबोटिक्स होम सुरक्षा रोबोट प्रदर्शन गर्दै "अहिलेसम्मको सर्वश्रेष्ठ शिविर!" उद्गार किशोर किशोरी जेभ्र ब्रुस, जब उनी ... थप पढ्नुहोस्